किन चाहियो केटाकेटीलाई अडियोभिजुअल सामग्री ? | नुवागी
०५ असार २०७८
किन चाहियो केटाकेटीलाई अडियोभिजुअल सामग्री ?
रङ र माटोमा खेल्न दिएका र संगीत सुनेर हुर्केको मान्छे टाठोबाठो हुन्छ भन्ने धारणा धेरैको छ । कुन उमेरदेखि देखाउने वा सुनाउने भन्नेबारे भने अहिले पनि अनुसन्धानहरू जारी नै छ । तर धेरैले भन्छन् हामीले बालबालिकालाई ६ महिनाको उमेरदेखि नै गीतहरू सुनाउन सक्छौँ । उनीहरूलाई सुमधुर संगीत सुनाउन सक्छौँ । १ वर्षको उमेरदेखि नै उनीहरूलाई सकारात्मक सन्देश दिने खालका सुमधुर संगीतका गीत सुनाउन सक्छौँ ।
सुनेको भन्दा आँखाले देखेको कुराहरू छिटै बुझिने र सम्झना रहिरहने हुन्छ । त्यसमाथि बालबालिकाले त देखेरै धेरै कुराहरू सिक्छन् । उनीहरू कसैको प्रवचन, भाषण जस्ता अभिव्यक्तिबाट खासै सिक्न सक्दैनन् । त्यसैले उही भावका कुराहरू गीत, नाच वा नाटकको रुपमा प्रस्तुत गरेको खण्डमा उनीहरू रमाइरमाइ सुन्छन्, हेर्छन् र सिक्छन् पनि । त्यसैले पनि इसिडि कक्षाका विद्यार्थीलाई गीतको माध्यमबाट सिकाइन्छ । इसिडिका शिक्षकहरू गीत सिकाइको बलियो माध्यम भएको अनुभव सुनाउँछन् । बालबालिकालाई केही सिकाउनु छ र केही ज्ञान दिनु छ भने सबैभन्दा सरल तरिका नै गीत रहेको शिक्षिकाहरू बताउँछन् । त्यहि भएर पनि सात बार, महिनाको नाम, आफ्नो शरिरको अङ्गको नामलगायत थिम अनुसार पढाउँदा शिक्षिकाहरू पहिला थिम अनुसारको गीतहरू बनाउँछन् र गीतको माध्यमबाट नै उनीहरूलाई पढाउने गर्छन् । विद्यालयको लागि पढ्न सहज बनाउने सामग्रीका रूपमा बालगीतका अडियो भिडियो सामग्री उपयोगी भएको विद्यालयका प्रअहरू बताउँछन् ।
मुलपानी बस्ने ६ वर्षिय सुगन्धा गीत सुन्दै टिभीमा नाचेको नक्कल गर्दै नाच्ने गर्छिन् । उनको ३ वर्षिय भाइ पनि ‘गाईको बच्चालाई के भन्छ’ भन्दै उफ्रिदै गीत गाइरहेको हुन्छ । अहिलेका बालबालिका धेरै समय इन्टरनेट र मोबाइलमा बिताउने गर्छन् । बढ्दो कामकाजी संस्कृतिले गर्दा निकै व्यस्त देखिने अभिभावकसँग बालबािलकाका लागि समय नै छैन । धेरैले बालबालिकालाई मोबाइल तथा टेलिभिजनतिर लगाएर आफू आफ्नो काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर टिभी वा मोबाइलमा संसार आउँछ । जानी नजानी थिच्दै जाँदा अनावश्यक भिडियोहरू फेला पर्न सक्छन् । उस्तैमा बालबालिका भुल्न थाले नचिताएसरी आफ्ना नानीहरू मासिने त्रास सधैँ रहिरहन्छ । त्यसैले उनीहरूका लागि काम लाग्ने अडियो र भिडियो सामग्री पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराइनुपर्छ । वाइफाइ वा मोबाइल डाटा चलाएर उनीहरूलाई मोबाइल थमाइदिए बच्चा डिजिटल समुद्रमा पुगी निकाल्नै नसक्ने गरी नराम्ररी डुब्न सक्छ । त्यसैले बालबालिकालाई शिक्षामूलक, सचेतनामूलक साथै मनोरञ्जनात्मक गीतका भिडियोहरू चयन गरी देखाउन सकिएमा इन्टरनेट र मोबाइलबाट उनीहरूले सहि कुरा सिक्न सक्छन् र स्मार्ट बन्न सक्छन् ।
नगरव्यापी लोकनृत्य प्रतियोगितामा क्वालिटी स्कुलको संगीनी नृत्य भयो उत्कृष्ट नृत्य
बागीश्वरी माविको ६१ औं र बागीश्वरी कलेजको १२ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न